Archive du 20161124
Hery Rajaonarimampianina Hividy �force one� amin�izay ?
Mitombo voninahitra hatrany ny filoha Malagasy Hery Rajaonarimampianina noho ny fampiantranoan�i Madagasikara ireo fivoriana iraisam-pirenena maro tato ho ato.
Nampidirina ny fahazoana �4X4� Holaniana anio ny tetibolam-panjakana 2017
Nampidirin'ny solombavambahoaka ao anatin'ny volavolan-dal�na momba ny tetibolam-panjakana 2017 ny fahazoan'izy ireo fiara tsy mataho-dalana.
Tolona fanorenana ifotony Handefa taratasy ho an�ny filoha frantsay
Mila ovaina ny fomba fiaraha-miasan�i Madagasikara sy Frantsa ary mila hazavaina ihany koa ny antony tsy hamerenana amin�ny malagasy ireo nosy manodidina hatramin�izao
Tombontsoa amin�ny frankofonia Tsy ampy ny fanazavana
Na dia nanao izay ho afany tetsy amin�ny Mon gouter Andrefan�Ambohijanahary aza ny mpanara-maso momba ny tanora no sady filohan�ny antenimieram-pirenena sy depiote avy any Mahajanga teo aloha, Soalahy Tsaratsiry,
Profesora Radanoara Tsy hisy vokany avy hatrany ny fampiantranoana ny Frankofonia
Adihevitra eny anivon�ny fiarahamonina Malagasy hatramin�izao ny mety ho tombontsoa ho azon�i Madagasikara na tsia amin�ny fandraisantsika ny fihaonana an-tampon�ny Frankofonia tontosaina ankehitriny.
Tetikasan�ny filoham-pirenena Tafiditra hatramin�ny zaridainan�ny kaominina
Mahafinaritra ny nahita ny fiovana tampoka nihatra tamin�ireo zaridaina kaominaly sasantsasany nasiana fanatsarana tao anatin�ny fotoana fohy, toy ny eny amin�iny faritr�i Soanierana anelanelan�ny tranombarotra Descours sy ny toeram-pivarotana solika Galana iny.
Aiza ny anjaranay e ?
Sady nanongo tena aho ry Jean no nalahelo naheno antso an-tariby nataon�ny olom-pirenena avy any Bekily hoe inona izany frankofonia izany ?
Fanangonam-baovaon�ny Frankofonia Hambaniana ny mpanao gazety Malagasy
Tsy takona afenina ny antsojay mahazo ny mpanao gazety Malagasy amin�ny fanangonam-baovao mandritra ny frankofonia.
FANOMEZANA FARAN�NY TAONA �Mercedes sprinter� no hatolotry ny Airtel
Iray volana mahery kely sisa dia higadona ny fetin�ny faran�ny taona sy ny taona vaovao.
IST AMPASAMPITO Hiara-kiasa amina onivesite Kanadiana
Hiara-kiasa hanampy ireo tanora mpianatra Malagasy vao misondrotra ny oniveriste iray any Kanada ny Institut Sup�rieur de la technologie etsy Ampasampito.
Fihaonamben'ny mpanao gazety any Antsirabe Tohanan'ny orinasa STAR
Hifarana anio ao Antsirabe rehefa naharitra andro vitsivitsy ilay fihaonamben�ny mpanao gazety miteny frantsay andiany faha-45 tanterahina eto amintsika. Fahombiazana ny fihaonana tamin�ny ankapobeny.
Hanilika sa hampifandray ?
� Varavarana mampifandray amin�ny any ivelany ve sa singam-panilikilihana ara-politika sy ara-kolontsaina eo amin�ny fiarahamonina ny teny frantsay eto Madagasikara ? �.
TAPATAPANY FARITRA BOENY
3.513.800 Ariary no voaangona tamin�ny Telefood notanterahina nanoloana ny Lapan�ny tan�na Mahajanga ny 11 novambra 2016.